जियोथर्मल उर्जा। तपाईंले जान्नुपर्ने सबै कुरा | हरियो नवीकरणीय
जियोथर्मल उर्जाको बारेमा तपाईंलाई थाहा पाउनुपर्ने सबै कुरा
जर्मन पोर्टिलो | | जियोथर्मल उर्जा, नवीकरणीय ऊर्जा
नवीकरणीय उर्जाको विश्व यसको उच्च प्रतिस्पर्धा र बढ्दो क्षमताको कारण अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा अधिक र अधिक खोक्रो हुँदै गइरहेको छ। त्यहाँ नवीकरणीय उर्जाका बिभिन्न प्रकारहरू छन् (जस्तो कि मलाई लाग्छ हामी सबैलाई थाहा छ) तर यो सत्य हो कि नवीकरणीय उर्जाहरूमा हामीले अझ बढी "प्रख्यात" भेट्टाउँदछौं, जस्तै सौर र वायु उर्जा, र अरू कम जस्तो कि ज्ञात जियोथर्मल उर्जा र बायोमास।
यस पोष्टमा म भूथर्मल उर्जासँग सम्बन्धित सबै कुराको बारेमा कुरा गर्न जाँदैछु। पछि यो के हो, यो कसरी कार्य गर्दछ र यसको लाभ र नवीकरणीय ऊर्जाको विश्वमा हानि।
2 भूगर्भीय जलाशयहरू
2.1 तातो पानी भण्डारहरू
2.1.1 उच्च तापक्रममा थर्मल पानी
2.1.2 मध्यम तापक्रममा थर्मल पानी
2.1.3 कम तापक्रममा थर्मल पानी
2.1.4 धेरै कम तापमानमा तापीय पानी
2.2 सुख्खा क्षेत्रहरू
2.3 गिजर जम्मा
3 भूगर्भीय उर्जाको प्रयोग
4 जियोथर्मल उर्जाका फाइदाहरू
5 भूगर्भीय उर्जा को नुकसान
जियोथर्मल उर्जा नवीकरणीय उर्जाको एक प्रकार हो जुन आधारित छ हाम्रो ग्रहको सबसोइलमा अवस्थित तापको प्रयोगमा। त्यो छ, को गर्मी प्रयोग गर्नुहोस् पृथ्वीको भित्री तहहरू र यसले ऊर्जा उत्पन्न गर्दछ। नवीकरणीय उर्जाहरूले सामान्यतया बाह्य तत्त्वहरू जस्तै पानी, हावा र सूर्यको प्रकाशको प्रयोग गर्दछ। जेओथर्मल उर्जा हो केवल एक मात्र यो बाह्य आदर्श भाग्छ।
तपाईले हेर्नु भएको छ, हामी तल जमीनको मुनिको गहिराइको ग्रेडियन्ट छ। त्यो हो, हामी तल झर्दा पृथ्वीको तापक्रम बढ्नेछ र पृथ्वीको कोरको नजिक जान्छौं। यो सत्य हो कि मानिसहरूले पुग्न सक्ने सब भन्दा गहिरो आवाजहरू गहिराईमा १२ किलोमिटरभन्दा बढी हुँदैन, तर हामीलाई थाहा छ कि थर्मल ग्रेडियन्ट बढ्छ हामी तल झर्ने हरेक १०० मिटरको लागि २ डिग्री सेल्सियस र ° डिग्री सेल्सियस बीच जमीनको तापक्रम। त्यहाँ ग्रहका विभिन्न क्षेत्रहरू छन् जहाँ यो ढाल धेरै ठूलो छ र यो पृथ्वीको क्रस्ट त्यस बिन्दु पातलो छ भन्ने तथ्यका कारणले हो। तसर्थ, पृथ्वीको भित्री सतहहरू (जस्तै आवरण, जुन तातो छ) पृथ्वीको सतहको नजिक छ र अधिक ताप प्रदान गर्दछ।
ठिक छ, त्यसले भन्यो कि यो राम्रो लाग्दछ, तर कहाँ र कसरी भौगर्भिक ऊर्जा निकालिन्छ?
मैले पहिले पनि भनेको छु, त्यहाँ ग्रहका क्षेत्रहरू छन् जहाँ थर्मल ग्रेडियन्ट अन्य ठाउँहरूमा भन्दा बढी स्पष्ट हुन्छ। यसले पृथ्वीको आन्तरिक तापको माध्यमबाट उर्जा दक्षता र उर्जा उत्पादन बढाउने कारण दिन्छ।
सामान्यतः, जियोथर्मल ऊर्जा उत्पादन क्षमता सौर्य ऊर्जाको क्षमता भन्दा धेरै कम छ (Other० मेगावाट / m² भूगर्भीयका लागि सौर्यका लागि 60० मेगावाट / m² को तुलनामा)। जहाँसम्म, उल्लेख गरिएको ठाउँमा थर्मल ग्रेडिएन्ट ठूलो छ, जसलाई भूगर्भीय जलाशय भनिन्छ, उर्जा उत्पादनको सम्भावना धेरै बढी हुन्छ (यो २०० मेगावाट / m² सम्म पुग्छ)। ऊर्जा उत्पादनको लागि यो उच्च क्षमताले एक्वीफरहरूमा तापको निर्माण गर्दछ जुन औद्योगिक शोषण गर्न सकिन्छ।
भूगर्भीय जलाशयहरूबाट ऊर्जा निकाल्नको लागि सबैभन्दा पहिले व्यवहार्य बजार अध्ययन गर्नु आवश्यक छ किनकि ड्रिलिंगको लागत गहिरोसँग बढ्छ। यो छ, हामी मा गहिरो ड्रिल रूपमा सतहमा तातो निकाल्ने प्रयास बढेको छ।
भौगोलिक निक्षेप को प्रकारहरु मध्ये हामी तीन पाउँछौं: तातो पानी, सुख्खा र गिज़र
तातो पानी भण्डारहरू
त्यहाँ दुई प्रकारका तातो पानी भण्डारहरू छन्: स्रोत र भूमिगत को ती। अघिल्लोलाई थर्मल स्नानको रूपमा प्रयोग गर्न सकिन्छ थोरै पानीको साथ उनीहरूलाई नुहाउनको लागि अलि अलि गर्दै तर यो उनीहरूसँग कम प्रवाह दरहरूको समस्या हो।
अर्कोतर्फ, हामीसँग भूमिगत एक्वीफरहरू छन् जुन पानीको भण्डार हो जुन धेरै उच्च तापमान र कम गहिराइमा हुन्छ। यस प्रकारको पानी प्रयोग गर्न सकिन्छ यसको आन्तरिक तातो निकाल्न सक्षम हुन। हामी यसको तातो फाइदा लिन पम्पहरू मार्फत तातो पानी सर्कुलेट गर्न सक्छौं।
तातो पानी भण्डारको शोषण कसरी गरिन्छ? थर्मल पानीको उर्जाको फाइदा लिनको लागि शोषण धेरै संख्यामा इनारको रूपमा हुनुपर्दछ, प्रत्येक दुई कुवाको लागि थर्मल पानी प्राप्त हुन्छ र यो इन्जेक्सनबाट एक्वीफरमा फर्काइन्छ। तल चिसो। यस प्रकारको शोषण p को विशेषता होवा समय मा लगभग असीमित अवधि थर्मल भण्डार थकाउने सम्भावनाहरू लगभग शून्य भएकोले पानी फेरि एक्वीफरमा इन्जेक्सन गरिएको हुनाले। पानीले निरन्तर बहाव राख्दछ र पानीको मात्रा परिवर्तन हुँदैन, त्यसैले हामी एक्वीफरमा विद्यमान पानी खारेज गर्दैनौं, तर हामी यसको तापक्रमको शक्ति तताउने र अन्यको लागि प्रयोग गर्छौं। यसको ठूलो फाइदा पनि छ जुन हामीले देख्यौं कि त्यहाँ कुनै प्रकारको प्रदूषण छैन किनकि बन्द पानी सर्किटले कुनै चुहावट गर्न अनुमति दिदैन।
तापक्रममा निर्भर हुन्छ जुन हामीले जलाशयमा पानी भेट्टाउँछौं, भूउथर्मल ऊर्जामा भिन्न कार्यहरू हुनेछ:
उच्च तापक्रममा थर्मल पानी
हामी तापक्रमको पानीहरू भेट्टाउँछौं 400०० डिग्री सेल्सियससम्म र भाप सतहमा उत्पादन हुन्छ। एक टर्वाइन र एक वैकल्पिक माध्यमबाट, विद्युतीय उर्जा उत्पन्न गर्न सकिन्छ र नेटवर्क मार्फत शहरहरूमा वितरण गर्न सकिन्छ।
मध्यम तापक्रममा थर्मल पानी
यो तापीय पानी कम तापक्रमको साथ एक्वीफरहरूमा फेला पर्‍यो, जुन, अधिकमा तिनीहरू १ 150० डिग्री सेल्सियससम्म पुग्छन्। यसैले पानीको वाष्पलाई बिजुलीमा रूपान्तरण कम क्षमताको साथ गरिन्छ र अस्थिर तरल पदार्थको प्रयोगबाट शोषण गर्नुपर्दछ।
कम तापक्रममा थर्मल पानी
यी निक्षेपहरू छन् पानी लगभग 70० डिग्री सेल्सियस मा त्यसैले यसको ताप केवल भूतापीय ढालबाट आउँछ।
धेरै कम तापमानमा तापीय पानी
हामीले पानी भेट्टायौं जसको तापक्रम अधिकतम पहुँच °० डिग्री सेल्सियस। यस प्रकारको पानी मार्फत प्राप्त गर्न सकिने गेउथर्मल उर्जाले हामीलाई घरको ताप जस्ता केही घरेलु आवश्यकताहरू पूरा गर्न मद्दत गर्दछ।
सुख्खा जलाशयहरू ती क्षेत्रहरू हुन् जहाँ ढु rock्गा सुख्खा र धेरै तातो छ। यस प्रकारको निक्षेपमा त्यहाँ कुनै तरल पदार्थ छैनन् जुन भू-तापीय ऊर्जा वा कुनै पनि प्रकारको पारगम्य सामग्री बोक्दछ। यो विशेषज्ञहरु जसले यी प्रकारका कारकहरू ताप प्रसारण गर्न सक्षम हुन परिचय दिन्छन्। यी निक्षेपहरूको कम उत्पादन र उच्च उत्पादन लागत छ।
हामी कसरी यी क्षेत्रहरू जियोथर्मल ऊर्जा निकाल्न सक्छौं? पर्याप्त प्रदर्शन गर्न र आर्थिक लाभ लिनको लागि, जमिन मुनिको क्षेत्र आवश्यक छ जुन धेरै गहिराउँदैन (अपरेटिंग लागतहरू गहिराईमा बढ्दै जाँदा महत्वपूर्ण बृद्धि भएको छ) र त्यसमा सुख्खा सामग्री वा ढु stones्गाहरू छन् तर धेरै उच्च तापक्रममा। पृथ्वी यी सामग्रीहरुमा पुग्न ड्रिल गरिएको छ र ड्रिलि waterमा पानी सुईन्छ। जब त्यो पानी इन्जेक्सन गरिन्छ, अर्को प्वाल हुन्छ जसको माध्यमबाट हामी यसको उर्जाको फाइदा लिनको लागि तातो पानी हटाउँछौं।
यस प्रकारको भण्डारको नोक्सान भनेको अझै यो प्रविधि पूरा गर्न टेक्नोलोजी र सामग्रीहरू हुन् आर्थिक हिसाबले अपराधी हो, त्यसैले यसको विकास र सुधारमा काम भइरहेको छ।
गेजरहरू तातो स्प्रि .हरू हुन् जसले स्वाभाविक रूपमा स्टीम र तातो पानीको प्वाल गर्दछ। यस ग्रहमा धेरै थोरै छन्। तिनीहरूको संवेदनशीलताको कारण, गिजेरहरू वातावरणमा फेला पर्दछ जहाँ तिनीहरूको सम्मान र हेरचाह उच्च हुनुपर्दछ ताकि उनीहरूको प्रदर्शन बिग्रन नपरोस्।
गिज़र जलाशयबाट तातो निकाल्नको लागि यसको तापक्रम टर्वाइनमार्फत सिधै मेकानिकल ऊर्जा प्राप्त गर्न प्रयोग गर्नुपर्दछ। यस प्रकारको एक्स्ट्र्याक्सनको साथ समस्या हो पहिले नै कम तापक्रममा पानीको रिजेक्शनले म्याग्मासलाई शान्त बनाउँछ र तिनीहरूलाई फुत्काउँछ। यो पनि विश्लेषण गरिएको छ कि चिसो पानीको इन्जेक्शन र म्याग्मासको चिसोले सानो तर बारम्बार भूकम्प उत्पन्न गर्दछ।
हामीले भूगर्भीय उर्जाको निकासीका लागि भण्डारका प्रकारहरू देख्यौं, तर हामीले उनीहरूलाई दिन सक्ने प्रयोगहरूको विश्लेषण मात्र गरेका छैनौं। आज भूगर्भीय ऊर्जा हाम्रो दैनिक जीवनको धेरै पक्षहरूमा समात्न सकिन्छ। यो तातो गर्न र ग्रीन हाउसहरूमा सही अवस्था सिर्जना गर्न र घरहरू र किनमेल केन्द्रहरूको लागि तातो प्रदान गर्न प्रयोग गर्न सकिन्छ।
यो चिसो र घरेलु तातो पानी उत्पादन को लागी पनि प्रयोग गर्न सकिन्छ। सामान्यतया भूतापीय ऊर्जाको प्रयोग हुन्छ स्पा, तताउने र तातो पानी, विद्युतीय उर्जाको उत्पादन, खनिजहरूको निकासको लागि र कृषि र जलचर्या।
जियोथर्मल उर्जाका फाइदाहरू
हामीले जेथर्मल उर्जाका फाइदाहरूका बारे प्रकाश पार्नुपर्ने पहिलो चीज यो हो कि यो एक प्रकार हो नवीकरणीय उर्जा त्यसैले यसलाई स्वच्छ उर्जाको रूपमा लिइन्छ। यसको शोषण र उर्जाको उपयोगले हरितगृह ग्यास उत्सर्जन गर्दैन र त्यसैले ओजोन तहलाई क्षति गर्दैन वा जलवायु परिवर्तनको प्रभाव बढाउनमा योगदान पुर्‍याउँछ।
न त फोहोर उत्पादन गर्दछ।
यस प्रकारको उर्जाबाट विद्युतीय उर्जा उत्पादनको लागत धेरै सस्तो हुन्छ। तिनीहरू कोइला प्लान्ट वा आणविक ऊर्जा प्लान्टमा भन्दा सस्तो छन्।
भौगर्भीय ऊर्जाको मात्रा जुन विश्वमा उत्पादन गर्न सकिन्छ सबै तेल, प्राकृतिक ग्यास, यूरेनियम, र कोइला मिलेको भन्दा उच्च मानिन्छ।
भूगर्भीय उर्जा को नुकसान
अन्तमा, सबै कुरा राम्रो छैन किनकी छैन, हामीले भूगर्भीय उर्जा को उपयोग को नुकसान को विश्लेषण गर्नु पर्छ।
एक ठूलो कमजोरी यो हो कि यो अझै थोरै प्राविधिक विकास छ। वास्तवमा आज नवीकरणीय उर्जाहरूको सूची बनाउँदा यो मुश्किलले उल्लेख गरिएको छ।
यसको सम्भावित चुहावटको शोषणको क्रममा जोखिमहरू छन् हाइड्रोजन सल्फाइड र आर्सेनिक, जो प्रदूषणकारी पदार्थहरू हुन्।
क्षेत्रीय सीमितताको अर्थ भू-तापीय उर्जा संयंत्रहरू मात्र त्यस्तो ठाउँमा स्थापित हुनुपर्दछ जहाँ सबसोइलको ताप धेरै बढी छ। थप रूपमा, उत्पादन गरिएको उर्जा जुन यसलाई निकासिएको क्षेत्रमा खपत गर्नुपर्दछ, यो धेरै टाढाका स्थानहरूमा पठाउन सकिदैन किनकि दक्षता हराउनेछ।
जियोथर्मल पावर प्लान्टका सुविधाहरूले ठूलो कारण दिन्छ परिदृश्य प्रभाव
भूगर्भीय उर्जा आफैमा एक अपूर्व उर्जा हुँदैन किनभने पृथ्वीको तातो श्वास कोहिलो छ।
केही ठाउँमा जहाँ यो ऊर्जा निकालेको छ, पानीको ईन्जेक्शनको परिणाम स्वरूप साना भूकम्पहरू हुन्छन्।
तपाईमले देख्न सक्नुहुने रूपमा, भूगर्भीय उर्जा, यती राम्रोसँग परिचित नभए पनि, ऊर्जाको भविष्यका लागि ध्यान दिन धेरै कार्यहरू र अन्तहीन विशेषताहरू छन्।
नवीकरणीय ऊर्जाको अन्य प्रकारहरू पत्ता लगाउनुहोस्:
नवीकरणीय उर्जाका प्रकारहरू
लेखको पूर्ण मार्ग: हरियो नवीकरणीय » नवीकरणीय ऊर्जा » जियोथर्मल उर्जाको बारेमा तपाईंलाई थाहा पाउनुपर्ने सबै कुरा
परित्याग गरिएको घर बिरालाहरू वन्यजन्तुको लागि खतरनाक छ
२०१ मा चीनले सबै नवीकरणीय उर्जा रेकर्डहरू तोड्न जारी राख्यो